Sadio Mane oo koobka Champions League ku badalan lahaa koobka qaramada qaaradda Africa. – Gool FM
Abdirashid Mohamud June 25, 2019
(Egypt) 25 June 2019. Senegal Sadio Mane ayaa doorbidaya inuu kula guuleysto koobka qaramada qaaradda Africa wadankiisa Senegal, isla markaana ku farxi doono in ka badan guushii koobka horyaalada yurub uu kooxdiisa la gaaray fasalkii dhamaaday.
Weeraryahanka ka tirsan Liverpool wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu muhiimsaneed ee kooxdiisa u gacan galiyay koobkii 6-aad ee horyaalada yurub, balse waligeed ma dhicin in wadanka Senegal oo ka mid ah quwadaha ay Africa mar walba ku faanto uu ku guuleysto koobka qaramada Africa.
Mane wuxuu doonayaa inuu ka mid noqdo liiska ciyaartoyda qarankiisa ee taariikhda u dhiga dadkiisa, isla markaana soo xerogaliya koobkii ugu horreeyay taariikhda.
“Waan ku badalan lahaa koobka Champions League aan kula guuleystay Liverpool koobka Africa oo aan la qaado Senegal” ayuu yiri Mane.
“Waxaan sameyn karnaa guryo noqosho aan caadi aheyn, waana riyadeena”
“Wax walba gacmaheena ayey ku jiraan”
“Waa wax iska cad inaan ka mid nahay kuwa ugu cad-cad”
“Taas ma inkiri karno, kaliya naguma filno inaan natiijo helno, balse waa inaan sameynaa heerka noogu fiican intaan ku jirno garoonka kulan walba”
Daafaca reer France ee Samuel Umtiti oo ka hadlay mustaqbalkiisa Barcelona